कोदालो धारिणी 'आमा' !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कोदालो धारिणी 'आमा' !
आमाहरूको व्यक्तित्व अनेकौं जिम्मेवारी र त्यागको धूलोले छोपिइरह्यो । हामी छोराछोरीले समेत आमा स्वतन्त्र महिला पनि हुन् भन्ने कुरा बिर्सियौं सायद, त्यो धूलो पुछ्न सघाएनौं । बरु त्यसमाथि 'महानता' र 'बलिदान' नामक लेप थपिदियौं ।
वैशाख २१, २०७६ सावित्री गौतम
२०६१ सालको कुरा, पोखराको सृजना बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँथें  । दसैं–तिहारको बीचमा स्कुल छिरेकी मलाई ६ कक्षाको कक्षा शिक्षकको जिम्मेवारी पनि आइलागेको थियो  ।
म गएको अर्को महिना दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा भयो । राजेश चौधरी भन्ने विद्यार्थी फर्स्ट ब्वाई थिए । नतिजा प्रकाशित हुने दिन राजेश आफ्नी आमालाई लिएर आए । मार्कसिट दिंदै मैले उनकी आमालाई भनें, ‘यहाँ सही गर्नुस् ।’ उहाँले ‘मैले जान्दिनँ’ भन्नुभो । मलाई उहाँले पढ्न–लेख्न जान्नुहुन्छ/हुन्न थाहा भएन । लज्जित भएँ, सकपकाएरै ‘राजेश ल तिमीले नै मम्मीको नाम लेखिदेऊ’ भनें । राजेशले आफ्नो मार्कसिटमा आफैंले आमाको नाम लेखिदिए । भोलिपल्ट मैले भनें, ‘राजेश मम्मीलाई पढाऊ है घरमा । फाइनलमा आउँदा मार्कसिटमा मम्मीले नाम लेखेको देख्न पाइयोस् ।’
नभन्दै अन्तिम परीक्षाको नतिजा लिन आएकी राजेशकी आमाले सहज तरिकाले छोराको मार्कसिटमा आफैंले नाम लेख्नु भयो । ६ कक्षाको विद्यार्थी राजेशले तीन महिनामै आमालाई आफ्नो नाम लेख्न सक्ने गरी पढ्न–लेख्न सिकाएको देखेपछि आजसम्म थकथक लागिरहन्छ, मैले त मेरी आमालाई धेरै कुरा सिकाउन सक्थें । किनकि मेरो बिहे भएर आमासँग छुट्टिन्जेल म बीए पास गरीकन एमए भर्ना भइसकेकी थिएँ ।
‘पुसमा स्कुल भर्ना गरेको, वैशाखमा आमा बित्नुभो, त्यसपछि घरको काम गर्न भनेर स्कुल छुटाइयो । ढिकीमा धान कुटेर चामल बनाउनुपर्थ्यो । ढिकी चलाउन नसक्ने भएकाले भाइलाई डोकोमा बोकेर धान कुट्थ्यौं,’ तनहुँको ढोरफिर्दीमा हुर्केकी आमाको मुखबाट बारम्बार हामीले यस्तो कुरा सुनिराख्छौं । मेरो बुवाले पनि घरमा काम गर्नुपर्ने कारण एक दिन बिराएर मात्रै स्कुल जाने, स्कुल जाँदै पहरामा हँसिया र भुटेको मकै लुकाएर जाने, छुट्टीपछि त्यही बाटो घाँस काट्न जाने, घाँसको मेलोसँगै किताब सार्ने गर्दै पढेको, बीचमा केही समय पढाइ छोड्नुपरेर फेरि सुरु गरेको आदि सुनाउनुहुन्छ । बुवाका अजंगका दुःखका पनि छुट्टै कहानी छन् तर कम्तीमा उहाँले दीर्घजीवी बा–आमा पाउनुभयो र जतिसुकै शारीरिक दुःख र आर्थिक अभावको साथमा पनि पढाइ भने घिस्रिरह्यो ।
केही दिनअघि फेसबुक हेर्दै गर्दा एउटा अनलाइनमा समाचार देखें– ‘छोरा क्याम्पसको प्राध्यापक, बैसठ्ठी वर्षीया आमा कक्षा एकमा भर्ना ।’ स्कुल भर्ना भएकी महिला मेरै ठूलीआमा हुनुहुँदो रैछ । आमाकी दिदी । सबैभन्दा जेठी उहाँ र उहाँमुनिकी मेरी आमाको स्कुल छुटेको थियो । स्कुल छुटेका आमाहरूमा अझै पनि औपचारिक शिक्षाको भोक कति रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण थियो त्यो । धेरै वर्षदेखि साठी नाघेका महिलाले एसएलसी दिँदै गरेका समाचार हामीले पढेका छौं । यही वर्ष जवान छोराछोरीका सेलिब्रिटी आमाहरू करिश्मा मानन्धर र शान्ता चौधरीले केटाकेटीसँगै स्कुल पढेर एसईई परीक्षा दिए । राजेशकी आमा, मेरी ठूलीआमा, शान्ता चौधरी र करिश्मा मानन्धरजस्ता आमा, यी सबैले आज आएर आफूभित्रको आफू खोजी गरेका छन्, सराहनीय कुरा हो । कुनै बाध्यताले शिक्षा प्राप्तिको अवसर गुमाएका तर आफ्नो जिन्दगीका अरू क्षेत्रमा प्राप्त गरेको दक्षता र जिउँदै रहेको ज्ञानको भोक हेर्दा यी र अरु धेरै आमाहरूको कथा उस्तैउस्तै लाग्छ ।
मलाई सानो हुँदा आमा ‘नपढेको मान्छे’ जस्तो कहिल्यै लाग्दैनथ्यो । आमा सजिलै हाम्रो स्कुलका किताब, साहित्यका किताब, पत्रपत्रिका आदि पढ्नुहुन्थ्यो । हामी खाद्यान्न र किरानाका सप्लायर थियौं, ठूलो व्यापार थियो, आमा दिनभर त्यसको सबै हिसाबकिताब सजिलै गर्नुहुन्थ्यो, लेख्नु पनि हुन्थ्यो । हामीलाई पढाउने शिक्षकलाई भेटे हाम्रो पढाइमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के के छन् भनेर सरसल्लाह गर्नुहुन्थ्यो । ‘बिहान चार बजे उठेर पढ्ने, बेलुका एघार बजेसम्म पढ्ने,’ सात–आठ कक्षामा पुगेपछि आमा हामीलाई बारम्बार भन्ने मात्र होइन चारै बजे उठाउने पनि गर्नुहुन्थ्यो । ‘पढाइका लागि तिमीहरूमा चेष्टा छैन, पिकनिक जानुपरे कति छिटो उठ्छौ, कसैले उठाउनै पर्दैन,’ भन्नुहुन्थ्यो । आमाको औपचारिक शिक्षाको अवधि तीन महिनाको मात्रै रैछ भन्ने हुर्कंदै जाँदा बुझ्दै गइयो । लगभग बिर्सिसकेको तीन महिने स्कुले शिक्षा बिहेपछि आमाले पुनर्जागृत गर्नुभयो, आमाको भनाइअनुसार कसैसँग एक शब्द पनि नसिकीकन ।
हाम्रो सुरुआती व्यापार स्याङ्जाको नाउँडाँडामा थियो । पसलमा भर्खरै अनलोड भएका चुरोटका पेटीलाई नामअनुसार छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने थियो । पसलका सहयोगीलाई ती पेटी छुट्याएर राख्न अह्राउँदै (बुबाको) परिवारकै एक सदस्यले भनेछन्, ‘हाम्रो घरमा एउटा गोरु पालेको छ के बटै’ (बटै सहयोगीको नाम) । गोरु अर्थात् अनपढ अर्थात् मेरी आमा र उहाँले चुरोटका छुट्टाछुट्टै नाम पढेर छुट्याएर राख्न सक्नुहुन्न । ‘गोरु’ शब्दले आमालाई यति घोचेछ कि कसैको सहयोगबिना नै आफ्नो तीन महिनाको औपचारिक शिक्षालाई बिउँताएर त्यसकै जगमा पढ्न–लेख्न र हिसाबकिताब गर्न सिक्नुभएछ । स्याङ्जाकै सेतीदोभानमा बस्दा आमालाई एक जना छिमेकीले ‘इन्दिरा गान्धी’ भनेर बोलाएको सुनेको छु । सायद पढाइजसरी नै बिहेको निकै धेरै समयपछि पुनर्जागृत भएको आमाको हक्की, स्पष्ट र नेतृत्वदायी व्यक्तित्वलाई भनेको होला । मेरी हजुरआमा बितेको समय थियो, आमा किरियामा हुनुहुन्थ्यो, बरन्डामा छिमेकी आन्टीहरू बसिरहेका थिए । एक जना महिला आफ्नो बच्चा बोकेर आइपुगिन्, लागूऔषधको दुर्व्यसनी लोग्नेले भर्खरै बच्चा निदाएको बेलामा बच्चाका कानका मुन्द्रा चोरेर लगिदिएको सुनाइन् । लोग्नेबाट हिंसा र बेवास्ता भोगेको, लोग्नेको परिवारबाट आफूलाई सकेसम्म ‘साइड लगाएर’ अर्को बिहे गराइदिने योजनासम्म बनाएको आदि गुनासो गरिन् । मैले सुनेपछि उहाँहरूलाई भनें, ‘यो सबै हेरेर तपाईंहरू कसरी बस्न सक्नुभएको ?’ एक जना छिमेकी आन्टीले भन्नुभो, ‘तेरी आमा नउम्केसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौं नानी ।’
इन्दिरा गान्धी उपनाम पाएकी आमालाई धेरैपटक राजनीतिमा आऊ भन्ने अनुरोध आए । पढाइ छैन भनेर हच्किनुभो । तीस वर्षभन्दा बढी सामाजिक काममा सक्रिय उहाँलाई धेरै संघसंस्थाले नेतृत्व लिन आग्रह गरे, उही औपचारिक शिक्षाको कारण नै हच्किनुभो । यतिखेर एउटा मन्दिरको कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । अध्यक्ष बन्न पनि पढाइकै कारण हच्किनुभयो होला भन्ने लाग्छ । अझै पनि आमा भन्नुहुन्छ, ‘तेरो बुवाको पढाइ काम लागेन, मलाई, फुपूलाई काकीहरूलाई भेला पारेर अंग्रेजी सिकाए पनि त हुने । एबीसीडी त सबै आफैंले सिकिसकें मैले, अब सामान्य शब्द र वाक्य जान्ने इच्छा छ ।’ सायद आमाले सामान्य लेखपढ र हिसाबकिताब गरेको देखेर त्योभन्दा अगाडिको कुरा पनि सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पहिला हाम्रो दिमागमै आएन । आजकल हामी कुनै पनि छोराछोरी नारायणगढ धेरै दिन बस्ने संयोग मिल्दैन, आमालाई अलिकति भए पनि पढाउन मिल्ने गरी । कहिले ठूलो वर्णमाला लगेर दिएको छु, यसमा अंग्रेजीका सामान्य वाक्य छन् सिक्नुस् भनेर । कैयौं पटक स्कुल भर्ना हुनुस् भनेको छु । अरुको अनुभवले स्कुल जान हौस्याउला कि भनेर शान्ता चौधरीको किताब ‘कमलरीदेखि सभासदसम्म’ लगिदिएको छु । तर आमा भन्नुहुन्छ, ‘मलाई सीधा हिसाब आउँछ, स्कुलमा पढाइने नयाँ जमानाको हिसाब पढ्न सक्दिनँ ।’ आमाको अर्को समस्या पनि छ, ‘आँखा कमजोर भए, कहिलेकाहीं एउटै अनुच्छेद पढ्न दस–पन्ध्र मिनेट लाग्छ, ठेलीका ठेली किताब कहिले पढेर सक्छु ?’ आमाका लागि पाका व्यक्तिको लागि डिजाइन गरिएको छुट्टै औपचारिक कोर्स जरुरी छ, जुन हामीकहाँ छैन ।
घर गएको बेला सधैं सोध्नुहुन्छ, ‘होइन तैंले एमफिल गर्ने कहिले हो ? पीएचडी गर्ने कहिले हो ? कहिलेसम्म यसैगरी ‘हल्लिने’ मात्र हो ?’
‘पोखरामा एमफिल छैन के आमा । पीएचडी पनि गर्नैपर्छ भन्ने के छ र ?’ मेरो जवाफ धेरैजसो यस्तो हुने गर्छ । पाँच छोरीकी आमा उहाँ कहिलेकाहीं भन्नुहुन्छ, ‘बिहान बिउँझेपछि छोरीहरू के गर्दै होलान् भन्ने चित्र कल्पना गर्छु । कहिलेकाहीं झमझम पानी दर्केको बेला हुन्छ, सबै जना ओभानोमा छौ, कम्प्युटर चलाइरहेका छौ भन्ने चित्र आउँछ । कम्तीमा मैले गाली गरिगरीकन पढाएँ, यतिसम्मका त भयौ ।’
आफ्नो बैंसमा नाउँडाँडामा बिहान आकाशमा तीनतारा देखेपछि डोकोमा गाग्री, हाम्रा थाङ्ना र घरभरिका लुगा बोकेर कुवातिर दौडिने, त्यसपछि गोरखा बजारमा बस्दा दिनभरि पसल र घर स्याहारिसकेपछि राति एघार बजे त्यहाँको तीनधारेमा लुगा धुन जाने दैनिकी बेहोरेकी आमा हामीलाई सुनाउनुहुन्छ, ‘सुरुमा आफ्नो हातमा केही नहुँदा त फेर्ने लुगा पनि धेरै थिएनन्, चिसा लुगा ज्यानमै ओभाउँथे ।’ त्यसैले पनि होला उहाँलाई हामी छोरीहरूको ‘ओभानो’ छविले सन्तोष दिलाउने । अर्को कुरा पाँच जना छोरी जन्माएकी र बीस–बाइस नाघुन्जेल पनि बिहे नगराई ‘मताएर’ राखेको आक्षेप खपेकी उहाँले आफन्तहरूको वचन सुन्नुभएको छ, ‘छोरीहरू शोला जसरी चिनेर राखेकी छ, ‘छिप्पिन्जेल’ बिहे नगरेका यसका छोरीले कति दुःख पाउलान् ।’ उनीहरूले सोचेजस्तो ‘दुःख’ हामीले पाएनौं भन्नेमा आमालाई सन्तोष छ किनकि आमाको नजरमा ओभानोमा बस्नु, कम्प्युटरमा गर्न मिल्ने काम पाउनु तुलनात्मक रूपमा ‘सुखी’ नै काम हो । हाम्रो जीवनशैली होस् वा रूपरंग, सानोमा निकै अनुशासनप्रेमी आमालाई हामी हुर्केपछि खासै आपत्ति भएको देखेको छैन । मैले छोरी पाएको बेला कपाल असाध्यै छोटो बनाएकी थिएँ । दसैंको दिन सारी–ब्लाउजसहित, एकदमै छोटो कपाल र एकदमै मोटाएकी तीन महिनाकी सुत्केरी म जब साँझमा टीका लगाउन पुगें, देखेर आमाले भन्नुभो, ‘गज्जब राम्रो, म नाउँडाँडा बस्दा मलायाका लाहुरेनीहरूलाई यस्तै देख्थें, रहर मानेर हेर्थें, तँ त्यस्तै देखिएकी छस् ।’ सानोमा हामीलाई कस्मेटिक जिन्दगीबाट निकै पर राख्ने आमालाई कहिलेकाहीं पछि कसरी खुला हुँदै जानुभयो भनेर सोध्छु पनि । ‘तिमीहरूले बीस काटेपछि, राम्रोसँग पढ्दै गएपछि, अब त तिमीहरूको जिम्मा तिमीहरू आफैंले लिन सक्छौ नि भनेर । अब चाहे कपाल मुडाउ, वा हरियो–पहेंलो बनाऊ । पढ–लेख र आफ्नो काममा लगनशील होऊ, त्यत्ति हो चाहिने कुरा ।’
आमा बिहान साढे दुई बजे उठ्नुहुन्छ । बजारमा बस्नुहुन्छ तर आज पनि गाई पाल्नुभएको छ । घरको सम्पूर्ण काम गर्नुहुन्छ, बारीमा कोदालो खन्नुहुन्छ, भकारो फाल्ने, दुहुने पनि गर्नुहुन्छ । यो सबै सकीकन घरभरिका सबैलाई हातैले स्विटर बुनेर पनि पु‍र्‍याउनुहुन्छ । ५९ वर्षकी हुनुभो, आज पनि स्विटरका नयाँनयाँ बुट्टा सिक्नुहुन्छ । सानैदेखि हामीले आमालाई सुत्नुअघि, बिहान चारै बजे र बाटोमा हिँड्दासमेत सधैं स्विटर बुन्दै हिंडेको देखेका छौं । उहाँले बुनेको गलैंचा ओछ्याएका छौं । आमाले एक मिनेट पनि समय खेर फालेको थाहै छैन । तीजमा कहिल्यै अरूले रचेको गीतमा नाचेको छैन भन्नुहुन्छ । आफ्नै पचासौं गीत छन् । आमालाई आजसम्म बिरामी भएँ भनेर टाउकोमा टालो बाँधेर सुतेको देखिएको छैन । देवघाटमा कुनै वृद्ध भक्तिनीको मृत्यु भएको खबर सबैभन्दा पहिला आमालाई आइपुग्छ, आमा शव बोकेरै घाटसम्म पुग्नुहुन्छ । आफ्नी सासू र भाइको समेत शव बोकिसकेकी आमा भन्नुहुन्छ, ‘आजसम्म यति धेरै बोकें कि अब त मृत्यु एकदमै स्वाभाविक लाग्छ ।’ वृद्धवृद्धा संरक्षण कोश भन्ने संस्थाको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ जसले सदस्यहरूबाटै महिनाको सय रुपैयाँ उठाएर ससानो सहयोग गर्छ । कसैलाई अतिशयोक्ति लाग्ला तर म आफैंचाहिँ आमाको ऊर्जा देखेर छक्क पर्छु । आमा नै कहिलेकाहीं हामीलाई भन्नुहुन्छ पनि, ‘मेरा छोराछोरी तिमीहरू यस्ता ‘लोइरे’ कसरी भयौ ?’ हाम्री आमा साँच्चिकै हामी छोराछोरीभन्दा धैरै स्मार्ट, बोल्ड र सक्रिय हुनुहुन्छ ।
अरू नेपाली घरहरूका आमा पनि मेरी आमाभन्दा कम स्मार्ट छैनन् । उनीहरू त झन् आफ्ना सबै स्मार्टनेसको साथमा नयाँ जमानाको स्मार्ट जीवनशैलीप्रति पनि खुला छन् । मेरी आमालाई त मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जालमा रुचि छैन भन्नुहुन्छ । तर आजका अरू धेरै आमाहरू मोबाइल फोन प्रयोग गर्न थालेका छन् । कतिपयका छोराछोरी विदेश छन् । जानुअघि सामाजिक सञ्जालमा आमाको खाता बनाइदिएर गएका छन्– भाइबर, स्काइप र मेसेन्जरमा सित्तैमा, धेरैबेर र अनुहार नै हेरेर आमासँग कुरा गर्नका लागि । यही बहानामा भए पनि आमाहरू थोरैथोरै इन्टरनेट साक्षर पनि भएका छन् ।
केही वर्षयता मातातीर्थ औंसीमा केही नेपाली छोराछोरीहरूले आआफ्ना आमाका, (सासू र काकीहरूका पनि) फोटो हाल्छन्, उनीहरूको दीर्घजीवनको कामना गर्छन् । आमा नभएकाले सम्झना गर्छन् । कतिपय विदेश भएका छोराछोरीले भिडियो च्याटमा आमाको मुख हेर्छन् । मेरै बहिनीले जर्मनीबाट बुवाको फोनको भाइबर मेसेन्जरमा भिडियो कल गर्छे र आमाको मुख हेर्छे । मचाहिं नारायणगढ भएको बेला परे आफ्नो फेसबुकमा आमालाई मेरा साथीहरूका आमाको फोटो देखाउँछु । हेरेपछि आमाको प्रतिक्रिया हुन्छ, ‘ओहो तेरो यो साथी त दुरुस्तै आमाजस्तै है !’, ‘यसको चाहिँ अनुहार आमातिर गएनछ’ आदि ।
मातातीर्थ औंसीकै दिनमा एकातिर आमाहरूको फोटोले सामाजिक सञ्जाल रंगिएको बेला अर्कातिर सँगसँगै केही व्यक्तिले यस्तो पनि लेखेका हुन्छन्, ‘मेरी आमा त गाउँमा बसेर कोदालो खन्छिन्, उनले फेसबुक हेर्दिनन्, त्यसैले फोटो नराखेको ।’ फेरि अर्काथरी ‘भविष्यवेत्ता’ हुन्छन् जो फेसबुकमा फोटो फोटो हाल्नेका आमाको बुढेसकाल पक्का वृद्धाश्रममै बित्नेछ भनेर बडो आत्मविश्वासका साथ ठोकुवा गर्छन् । आमाका फोटोहरूले त न हिंसाको प्रवर्द्धन गरेका हुन्छन् न ती बीभत्स हुन्छन् । तर पनि आमाहरूको फोटो एक दिनका लागि डिजिटल दुनियामा देखिंदा उनीहरूलाई कत्रो आपत्ति । आमाले गाउँमा बसेर कोदालो खनेकैमा गर्व गर्ने र अरूले आफ्नी आमाको फेसबुकमा फोटो हालेकोमा कुण्ठाले चाउरिनेमध्ये केही व्यक्ति यस्ता पनि हुन्छन् जो बाह्रैमास, चौबीसै घण्टा सामाजिक सञ्जालमा झुन्डिएर बस्छन् अलिकति सचेत र अधिकारको कुरा गर्ने महिलालाई गालीगलौज वा कटाक्ष गरिरहन्छन् । लाग्छ उनीहरूलाई महिला सचेत हुनुमा, साक्षर हुनुमा, इन्टरनेट र प्रविधिको पहुँचमा पुग्नुसँग समस्या छ जुन कुण्ठा आमाले इन्टरनेट चलाउन नसकेकोमा ‘गौरवान्वित’ भएको रूपमा बाहिर निस्किन्छ । यिनीहरूको नजरमा त महावीर पुनजस्ता दुर्गम गाउँमा इन्टरनेट क्रान्ति ल्याउने व्यक्ति ‘अपराधी’ नै होलान् जसले अक्षरै नचिनेका, ‘कोदालो खनिरहेका’ आमाहरूलाई इन्टरनेटको दुनियाको सयर गराए । आज ती आमाहरू इन्टरनेटबाट डाक्टरसँग सल्लाह लिन्छन्, आफूले घरमा कोदालो खनेरै फलाएका तरकारी बेच्छन्, इन्टरनेटबाटै गाईभैंसीसमेत बेच्छन् ।
मिथकहरूमा वर्णन गरिएका असाध्यै शक्तिशाली र विद्वान् ‘माता’ हरूको चित्र हेर्दै र कथा सुन्दै हुर्किएका नेपाली समाजका केही व्यक्तिमा आमाहरू चाहिं सधैं भावुक, निरीह, अनपढ, जेसुकै पनि सहने, धर्तीजस्ता हुनुपर्ने भन्ने मनोविज्ञान देख्दा अनौठो लाग्छ । मिथकमा शिर ठाडो गरेर खुँडा, वीणा र पुस्तक समातेका ‘माता’ लाई पुज्नेहरूले वास्तविकतामा सधैं ज्यान निहु‍र्‍याएर कोदालो खनिरहेका आमालाई महान् देख्ने द्वैध मान्यता देखेर छक्क परिन्छ । स्मार्ट फोन र स्मार्ट टीभीको प्रयोग पुरानो भईकन अब बजारमा स्मार्ट सहरको बहस सुरु भइसकेको छ । तर छोराछोरी बढीभन्दा बढी स्मार्ट होऊन् भन्ने चाहनाकै कारण आफ्ना कैयौं चाहनालाई पछाडि सारेका आमाहरूचाहिं हामीलाई सधैं केही नजानेका चाहिएको छ । आमाको चाहिं आज पनि सधैं कोदालो खनिरहेकी आमा, घाँस काटिरहेकी आमा आदि तस्बिर नै मारामार बिकिरहेका छन् । जबकि आमाहरू स्वयंलाई भने आफूलाई सशक्त र अध्यावधिक गर्दै लैजानुमा कहिल्यै समस्या रहेको देखिएन ।
वर्षौंदेखि घरको धन्दा सकेर आमाहरू रातिमा प्रौढ कक्षा पढेका छन्, महिला समूह बनाएर सीपमूलक र सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय छन्, बचत समूह स्थापना गरेका छन्, देश घुमेका छन् । आजका धेरै आमा चोलोको खल्तीमा मोबाइल फोन राखेर दिनभरि काम गरेका छन् । त्यतिले नपुगेर छोराछोरी र नातिनातिनाको उमेरका केटाकेटीसँग स्कुल भर्ना भएर पढेका समेत छन् । बरु अब हामीले पढाइ छुटेका र फेरि औपचारिक शिक्षा सुरु गर्न चाहने आमाहरूका लागि थोरै वर्षमा पूरा गर्न सकिने, आफ्नै उमेरका पाका साथीहरूसँग पढ्न पाउने र उनीहरूले पढ्न सहज हुने गरी डिजाइन गरिएका औपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमका लागि माग पो गर्नुपर्ने हो । दिनभरि स्कुल गएर पढ्न नचाहनेहरूलाई इन्टरनेटबाट पढाइ हुने खुला शिक्षाका लागि पहल गर्नुपर्ने हो । त्यति पनि गर्न नसके भइरहेको कार्यक्रममै पढ्न चाहने पाका व्यक्तिहरूका लागि स्कुलमा छुट्टै समयमा पढाइ हुने व्यवस्थाका लागि आवाज उठाउनुपर्ने हो । अब हामीले पो आमाहरूको जिन्दगी सहज बनाउन के केसम्म गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो स्मार्टनेस देखाउनुपर्ने हो ।
कुनै आमाले साक्षरता र औपचारिक शिक्षासमेतको चाहना राख्छन् भने कुनै स्मार्ट छोरा वा छोरीले यी सबैको सहज पहुँचमा होस् भनेर कोसिस नै गर्ला । आमाले कोदालो माक्रै खनिरहेकोमा गर्व नगर्ला । यत्रो वर्ष हाम्रा लागि दिनरात खटेका आमाहरूको व्यत्तित्व अनेकौं जिम्मेवारी र त्यागको धूलोले छोपिइरह्यो । हामी छोराछोरीले समेत आमा स्वतन्त्र महिला पनि हुन् भन्ने कुरा बिर्सियौं सायद, त्यो धूलो पुछ्न सघाएनौं । बरु त्यसमाथि ‘महानता’ र ‘बलिदान’ नामक लेप थपिदियौं ।
सौन्दर्य प्रतियोगिता सदाकालीन बनावटी हुन् भन्नेमा मेरो शंका कहिल्यै रहेन । तर अस्ति भर्खरै संयोगवश सन् १९९४ को मिस युनिभर्स प्रतियोगिताको छोटो भिडियो क्लिप हेर्न पुगें । फर्स्ट रनर अप कोलम्बियाकी क्यारोलिना गोमेजले फाइनल चरणमा ‘महिला हुनुको सार के हो ?’ भन्ने प्रश्नमा दिएको जवाफ मलाई विजेता सुस्मिता सेनको भन्दा कैयौं गुणा राम्रो लाग्यो । उनले भनेकी रहिछन्, ‘नारी हुनुको सार भनेको ‘नारीत्व’ मात्रै होइन, महिलाले ‘आफ्नो जिन्दगी’ बाँच्नु पनि हो, छोराछोरीले आमालाई उनीहरूकी आमाको साथसाथै एउटी महिलाको रूपमा पनि सम्मान गरून् भनेर थाहा दिनु पनि हो ।’